OTU ESI WEPU NCHEKWA EDEREDE SITE NA USB FLASH DRIVE (USB-FLASH DRIVE, MICROSD, WDG.) - DISK - 2019
N'oge na-adịbeghị anya, ọtụtụ ndị ọrụ abịakwutewo m nsogbu nke otu ụdị - mgbe ị na-edegharị ozi na USB flash drive, njehie mere, nke ọdịnaya ndị a: "A na-edebe diski ahụ. Wepu nchedo ma obu jiri uzo ozo.".
Nke a nwere ike ime n'ihi ihe dị iche iche ma otu ụdị ngwọta adịghị adị. N'isiokwu a, m ga-enye isi ihe kpatara njehie a na ngwọta ha. N'ọtụtụ ọnọdụ, nkwenye site na isiokwu ahụ ga-alaghachi ụgbọala gị gaa ọrụ nkịtị. Ka anyị malite ...
1) Ntughari ederede nchedo ka enyere ya na ngwa mkporo.
Ihe kachasị eme ka njehie nchebe pụta bụ ngbanwe ọkụ onwe ya (mkpọchi). Na mbụ, ihe dị ka nke a bụ na disks disks: M dere ihe dị mkpa, gbanwee ya na-agụ-nanị mode - na ị na-echegbu onwe gị na ị ga-echefu ma na mberede ihichapu data. A na-ahụkarị mgbanwe ndị dị na ngwa microSD flash.
Na fig. 1 na-egosi ụdị mgba ọkụ dị otú ahụ, ọ bụrụ na ị na-etinye mgbanwe ahụ na ọnọdụ mkpọchi, mgbe ahụ ịnwere ike iṅomi faịlụ site na mkpo ọkụ, dee ya, ma ọ bụ ịhazi ya!
Fig. 1. MicroSD na nchekwa ederede.
Site n'ụzọ, mgbe ụfọdụ na ụfọdụ ngwa USB USB ị nwere ike ịchọta mgbanwe dị otú ahụ (lee fig. 2). O bu ihe kwesiri iburu n'uche na o di oke obere ma obu nani ndi a ma amaghi na Chinese.
Fig.2. RiData flash ụgbọala na nchedo ederede.
2) Ngbochi nke ndekọ na ntọala nke Windows
Na n'ozuzu, site na ndabara, na Windows enweghi ihe mgbochi ichikota na ịde ihe gbasara kọmputa. Ma n'ihe metụtara nje virus (na n'ezie, ihe ọ bụla malware), ma ọ bụ, dịka ọmụmaatụ, mgbe ị na-eji ma na-etinye mgbakọ dịgasị iche site n'aka ndị edemede dị iche iche, ọ ga-ekwe omume na e nweela ụfọdụ ntọala na ndekọ ahụ.
Ya mere, ndụmọdụ dị mfe:
buru ụzọ lelee PC gị (laptọọpụ) maka nje virus (
Na-esote, lelee ntọala ndekọ na atumatu ịnweta mpaghara (ọzọ na nke a mgbe e mesịrị n'isiokwu ahụ).
1. Lelee Ntọala Ntọala
Esi tinye ndekọ:
pịa nchikota nchikota WIN + R;
mgbe ahụ na windo ọsọ na-egosi, tinye regedit;
pịa Tinye (lee fig fig 3.).
Site n'ụzọ, na Windows 7, ị nwere ike mepee nchịkọta akụkọ site na menu START.
Fig. 3. Gbaa ọsọ ọsọ.
Ọzọ, na kọlụm ruo n'aka ekpe, gaa na taabụ: HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Control StorageDevicePolicies
Rịba ama Nkebi Njikwa ị ga - enwe ngalaba StorageDevicePolicies - o nwere ike ọ gaghị abụ ... Ọ bụrụ na ọ bụghị ebe ahụ, ịkwesịrị ịmepụta ya, maka nke a, pịa nri na nri Njikwa ma họta mpaghara na mpaghara menu adaala, ma nye ya aha - StorageDevicePolicies. Ịrụ ọrụ na ngalaba yiri ọrụ kachasị na nchekwa na onye nyocha (lee fig 4).
Fig. 4. Ndekọ - mepụta ngalaba nchekwaDevicePolicies.
Ọzọkwa na ngalaba StorageDevicePolicies mepụta oke DWORD 32 bit: Iji mee nke a, pịa nnọọ mpaghara ahụ. StorageDevicePolicies Pịa aka nri ma họrọ ihe kwesịrị ekwesị na menu ndọpụta.
Site n'ụzọ, ụdị DWORD 32 bit nwere ike ịmeworịrịrị na mpaghara a (ọ bụrụ na ị nwere otu, n'ezie).
Fig. 5. Ndekọ - okike nke DWORD oke 32 (clickable).
Ugbu a, mepee oke a ma mee ka ọ baa uru na 0 (dika dị na fig 6). Ọ bụrụ na ị nwere okeDWORD 32 bit emeworị, gbanwee uru ya na 0. Na-esote, mechie nchịkọta akụkọ ahụ, wee malitegharịa kọmputa ahụ.
Fig. 6. Tọọ ntọala
Mgbe ịmaliteghachiri kọmputa ahụ, ọ bụrụ na ihe kpatara ya bụ na ndekọ ahụ, ị ​​nwere ike ịde faịlụ ndị dị mkpa na kọmputa USB.
2. Nchịkọta Nweta Obodo
Ọzọkwa, atumatu ịnweta obodo nwere ike igbochi ịdekọ ihe ọmụma na draịvụ nkwụnye (gụnyere mgbagwoju anya). Iji mepee nchịkọta iwu nchịkwa mpaghara - dị nnọọ pịa bọtịnụ. Nweta + R na na akara, tinye gpedit.msc, wee Tinye isi (lee ọgụgụ nke 7).
Fig. 7. Gbaa ọsọ.
Ọzọ, ị ga-emepe taabụ na-esonụ otu: Nhazi Kọmputa / Ntọala nchịkwa / System / Nweta Ngwaọrụ Nchekwa.
Mgbe ahụ, n'akụkụ aka nri, ṅaa ntị na nhọrọ "Ngwaọrụ ndị a na-ewepụ: gbanyụọ ndekọ". Mepee ọnọdụ a ma gbanyụọ ya (ma ọ bụ gbanwee gaa na "Adịghị edozi").
Fig. 8. Machibido ederede na draịva nke mbughari ...
N'ezie, mgbe amaokwu ndị a kapịrị ọnụ, malitegharịa kọmputa ma gbalịa ide faịlụ gaa na USB flash drive.
3) Ọkpụkpọ nhazi usoro mpịakọta / disk
Dịka ọmụmaatụ, dịka ọmụmaatụ, na ụdị ụfọdụ nke nje - ọ nweghị ihe ọzọ na-anọgide ma ọ ga-esi gbanwee ụgbọala iji wepụ ya kpamkpam. Ọdịdị dị ala dị ala ga-ebibi kpamkpam ihe niile gbasara ngwa ngwa (ị gaghị enwe ike ịmeghachi ha ụlọ ọrụ dịgasị iche iche), ma n'otu oge ahụ, ọ na-enye aka iweghachite bọmbụ mbanye (ma ọ bụ diski ike), nke ọtụtụ ndị tinyeworị "obe" ...
Ihe ọrụ nwere ike iji.
Na n'ozuzu, enwere ọtụtụ ihe dị mkpa maka nhazi ọkwa dị ala (ọfụfụ, ị nwekwara ike ịchọta 1-2 ọrụ maka "reanimation" ngwaọrụ ahụ na ebe nrụọrụ weebụ na-emepụta ụgbọala flash). Ka o sina dị, site na ahụmahụ, abịara m na nkwubi na ọ ka mma iji otu n'ime ọrụ abụọ ndị na-esonụ:
Ngwaọrụ Nchekwa Diski HP USB. Ihe dị mfe, enweghị ntinye maka nhazi USB draịva (a na-akwado usoro faịlụ ndị a: NTFS, FAT, FAT32). Na-arụ ọrụ na ngwaọrụ site na USB 2.0 ọdụ ụgbọ mmiri. Onye Mmepụta: http://www.hp.com/
Ngwaọrụ Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ HDD LLF. Ezigbo utom na algọridim di iche iche nke na-enye gi ohere ime ngwa ngwa na nhazi (gunyere nsogbu nsogbu nke ndi ozo na Windows adighi ahu) HDD na kaadị Flash. Na nsụgharị n'efu enwere oke na ọsọ nke ọrụ - 50 MB / s (maka ngwa draịvụ adịghị mkpa). Aga m egosiputa ihe omuma atu di n'okpuru a na oru a. Site na saịtị: //hddguru.com/software/HDD-LLF-Low-Level-Format-Tool/
Ihe atụ nke nhazi usoro dị ala (na HDD LLF Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ)
1. Nke mbụ, detuo faịlụ niile dị mkpa site na USB flash drive na diski ike nke kọmputa (Achọrọ m ime nkwado. Mgbe ị na-agwakọta ya, ya na ụgbọala ịgba ọsọ a ị pụghị ịghaghachi ihe ọ bụla!).
2. Na-esote, jikọọ USB flash drive na-agba ọsọ ọrụ ahụ. Na mpio mbụ, họrọ "Nọgidenụ maka n'efu" (yabụ ịnọgide na-arụ ọrụ na mbipute n'efu).
3. Ị ga-ahụ ndepụta nke ndị ọ bụla jikọtara na draịva. Chọta ndepụta gị na listi (ka ụdị ngwaọrụ na olu ya na-eduzi ya).
Fig. 9. Ịhọrọ ụda windo
4. Mepee LOW-LEVE FORMAT taabụ wee pịa Usoro Nke a Ngwaọrụ. Ihe omume a ga - ajụ gị ọzọ ma dọọ gị aka ná ntị banyere iwepụ ihe niile dị na windo - naanị azịza ya.
Fig. 10. Nhazi usoro
5. Na-esote, chere ruo mgbe a na-ede usoro. Oge ga-adabere na steeti nke usoro mgbasa ozi na usoro nke usoro ihe a (akwụ ụgwọ ọrụ ngwa ngwa). Mgbe arụ ọrụ ahụ mechara, ogwe aka akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-agbanwe edo edo. Ugbu a, ị nwere ike mechie ọrụ ahụ ma gaa n'ihu n'ịhazi usoro dị elu.
Fig. 11. Ịhazi usoro a
6. Ụzọ kachasị mfe bụ iji gaa "Kọmputa a"(ma ọ bụ"Kọmputa m"), họrọ eriri USB USB ejikọtara site na ndepụta nke ngwaọrụ na pịa nri na ya: họrọ ọrụ nhazi na listi ndọpụta. Ọzọ, dezie aha flash USB USB ma dee usoro faịlụ (dịka ọmụmaatụ, NTFS, ebe ọ na-akwado faịlụ karịrị 4 GB Lee fig 12).
Fig. 12. Kọmputa / formatting flash drive
Nke ahụ niile. Mgbe usoro yiri nke a, windo flash gị (n'ọtụtụ ọnọdụ, ~ 97%) ga-amalite ịrụ ọrụ dị ka atụ anya (Ihe wezuga bu mgbe ugbua kpochapu ugbua ugbua usoro uzo agagh enyere ... ).
Kedu ihe kpatara njehie dị otú ahụ, gịnị ka a ga-eme ka ọ ghara ịdị?
N'ikpeazụ, ebe a bụ ntakịrị ihe mere njehie ji esi na nchedo ederede (iji ntuziaka ndị edepụtara n'okpuru a ga-eme ka ndụ nke ngwa mgbago gị dịkwuo elu).
Mbụ, mgbe ọ bụla ị na-apụ na windo ụgbọala, jiri nkwụsịtụ nchedo: pịa nri na tray na-esote ụda na akara ngosi nke ikuku ọkụ ejikọrọ ma họrọ - gbanyụọ n'ime menu. Dị ka ihe m kwuru, ọtụtụ ndị ọrụ adịghị eme nke a. Na n'otu oge ahụ, nkwụsịtụ dị otú ahụ nwere ike imebi faịlụ faịlụ (dịka ọmụmaatụ);
Nke abụọ, wụnye antivirus na kọmpụta nke ị na-arụ ọrụ na windo mbanye. N'ezie, m ghọtara na ọ gaghị ekwe omume ịtinye ngwa ngwa n'ebe ọ bụla na PC na software antivirus - mana mgbe ị si n'aka enyi gị, ebe ị depụtaara ya faịlụ (site na ụlọ akwụkwọ mmuta, wdg.), Mgbe ị jikọtara flash mbanye na PC gị - nyochaa ya ;
Gbalịa ka ị ghara ịdọrọ ma ọ bụ tụfuo ụgbọala flash. Dị ka ihe atụ, ọtụtụ ndị na-etinye eriri flash USB na igodo ahụ, dịka ogwe aka. Enweghị ihe ọ bụla na nke a - ma mgbe mgbe, a na-atụchi mkpịsị ugodi n'elu tebụl (tebụl okpokoro) mgbe ị na-alọta (igodo ahụ agaghị enwe ihe ọ bụla, mana mgbawa na-efe efe na-adaba na ha);
Aga m ahapụ na nke a, ma ọ bụrụ na enwere ihe iji gbakwunye - M ga-enwe ekele. Ọ bụ obere ihe na-ezighi ezi!